Daawo: Dawladda Soomaaliya oo ka hadashay Arinta Sucuudiga ee Xooliha dhoofinta uga joojiyeen!! | kowtharmedia.com
Home MAQAALO Daawo: Dawladda Soomaaliya oo ka hadashay Arinta Sucuudiga ee Xooliha dhoofinta uga joojiyeen!!
Daawo: Dawladda Soomaaliya oo ka hadashay Arinta Sucuudiga ee Xooliha dhoofinta uga joojiyeen!!
Qaar ka mida ganacsatada Xoolaha ee ku sugan magaalada Jeddah ayaa Warbaahinta la wadaagay qoraal ay sheegeen inuu ka soo baxay Wasaradda Deegaanka, Beeraha iyo Biyaha ee Sucuudiga, kaas oo sheegayey in si ku-meel gaadh ah loo hakiyey Xoolihii Soomaaliya ee dalkaas tegayey.
Waxaa la sheegay in Amarkan ka soo baxay Sucuudiga loo qaybiyey waraaqo qaar ka mida ganacsatada xoolaha isla markaana amar lagu siiyey in la hakiyo xoolaha iyada oo loo sababeeyey arrimo dhinaca caafimaadka ah.
Safiirka Dawlada Soomaaliya u fadhiga dalka sucuudiga ayaa sheegay in dhamaan Xoolihii ka imaan jiray Dekadaha Soomaaliya ee Berbera, Boosaaso, Kismaayo iyo Muqdisho la Joojiyey, iyadoona Su’aalo kala duwan laga waydiiyey.
Previous PostXaaska Madaxweynaha Zimbabwe oo loo haysto faraanti qiimihiisu gaarayo 1.4 milyan oo Dollar!! Next PostHaweeney Madaxweyne aheyd oo gabar ay Saaxiibo yihiin darteeda xilkii looga qaaday Daawo Sawirro!!